KingMarayu: May 2009
Find more videos like this on Arakanese Meeting Point
ငရို.ရခိုင်အလှ၊ လက်ဆောင်အလှနန်.အိမ်ပြန်ကတ်ပါ။လူများတိုင်းပြည်မှာ သဝေထိုး မနိန်ကတ်ပါကေ့။
Posted by KingMarayu at 10:16 1 comments
Posted by KingMarayu at 23:440comments
အရည်မရ ၊ အဖတ်မရ
ခါးရိုးကျိုးစွာ အတန်ကျသိမ့်ယင့် ...။
ကကောင်းမ၀ီး ဒေ ...။
Posted by KingMarayu at 06:530comments
Posted by KingMarayu at 23:460comments
ရခိုင်စာသည် ငရို.စာ။ ကိုယ့်စာကို ကိုယ်သတ္တိဟိဟိ ရွီးပါ။
Posted by KingMarayu at 10:030comments
Posted by KingMarayu at 14:560comments
နှုမ်သိမ့်ပီးဖို. မထင် ....................။
ရှာစွာ အဘာဝ လို.ထင်ရေ ...........။
အုပ်တိုက် နန်. နီရေ
ဘဇောင်ဟိ ဖို.လေ့ ဂု လို.
တစ်ချက် မကြည့်သင့်လား ....................။
ငါ မှားနိန်လာ ...........................။
ငါ မှားနိန်လာ ..............................။
ချစ်တေ ချစ်တေ လတ်
ရှိမှာကျကေ ဟိသမျှ သွားခြဲလို.
ဒေ သူရို.တိကို အားမကျဖို.
ငါ မှားနိန်လာ .....................။
မျိုးချစ်တေ ဆိုရေ လူတိ
ရိုးမ တောင်တန်း တိ
ကျောက်စိုင်၊ ကျောက်သား ရို.
ဒဏ်ရာတိ အဂုထိ မပျောက်သိမ့်ဆိုစွာကို
ငါ့ကို အဝေး .....မင်း မှားနိန်ရေ လို.
စွပ်စွဲ ကတ်တေ လူတိ
မဟာ မြတ်မုနိ ကို
လား လို. မိန်.ကြည့် ကတ် .................။
Posted by KingMarayu at 09:210comments
သာဦးဖြူတယောက် မိုးထစောစော ရွာကသျှင်ပြူပွဲမှာ လုပ်အားဒါနပြူဖို့အတွက် အိပ်ရာစောစောဝင်လိုက်သည်။ အိပ်ရာမ၀င်ခင် ညဇာသား (၄) ချက်တီးလောက်က သူငယ်ချင်းတိနှင့် ရွာကသျှင်ပြူပွဲအကြောင်း ပြောဖြစ်ခသိမ့်သည်။ သူငယ်ချင်းမတိက သာဦးဖြူကို မိုးထစောစော (၄) ချက်တီးမှာ လာနှိုးမည်ဟုပြောသည်။ စောစောထရဖို့။ ချက်ရဖို့၊ ပြုတ်ရဖို့။ ယင်းအတွက် သာဦးဖြူတယောက် စောစောအိပ်ရာဝင်လားခြင်းဖြစ်သည်။
မိုးထစောစော အိမ်ရှိခြံဝက သူငယ်ချင်းများခေါ်သံကြားမှ သာဦးဖြူတယောက် အိပ်ရာက လန့်နိုးလာသည်။ ယော် (၄) ချက်တောင်တီးယာမလားဂု။ မျက်နှာပရုန်းနရုန်းသစ်၍ အိမ်အောက်သို့ ဆင်းလတ်သည်။ သူငယ်ချင်းတကျိပ် အပြုံးကိုယ်စီနှင့် သာဦးဖြူကို စောင့်ကြိုလျှက်ဟိသည်။ “ဟေး နင်ကကောင်း အအိပ်ပုတ်စွာမလား ဒေကုလိမ္မေ” ဟုလည်းပြောသည်။
ယင်းပိုင်နှင့် ကောင်းမကြာလိုက် သာဦးဖြူ အလှူလုပ်ရာ ရွာမဏ္ဍပ်သို့ရောက်သည်။ ရွာကလူတိ တရောင်းရောင်းနှင့် ကကောင်းအလုပ်ချုတ်နီကတ်စွာ တွိရသည်။ ကြက်သွန်ဖျင်ရေလူက ဖျင်၊ အားလူးသင်ရေလူက သင်၊ ဒိုင်ထ်ိုးရေလူက ထိုး၊ ၀တ်သားချက်တေလူက ချက်။ သားဦးဖြုလည်း ကိုယ်တနိုင် သူငယ်ချင်းတိနှင့် လုပ်အားဒါနပြူပါသည်။
အလှူပွဲတွင် သူမကို တဖက်သတ်ကြိုက်နီသော အောင်သိန်းကျော်ဆိုရေ အသားမဲမဲ ထောင်ထောင်မောင်းမောင်း လူပျိုကြီးကလည်း ရစ်သိရစ်ကာလုပ်နီသည်။ သျှင်ပြူပွဲ ကောင်းကောင်းစည်သည်။ လူပေါင်းထောင်ချီ၍ လာသည်။ ဘုန်းကြီးတရားဟောသံ၊ သူငယ်ချင်းများက သာဦးဖြူကို နတ်ကတ်သွမ်းကတ်သံ၊ လူများရယ်သံ၊ ပြောသံဆိုသံ၊ လော်စပီကာက ရခိုင်တေးခြင်းသံများဖြင့် တပွဲလုံးရောင်းရောင်းသတ် ဆူဆူညံနီသည်။ ထိုအသံများကို သာဦးဖြူတယောက် နားဖြင့်အတိုင်းသားကြားနီရသည်။
အလှူပွဲပြီးလို့ နိခြင်း (၃) ချက်တီးလောက်တွင် ကောင်းကောင်းညောင်းပါလတ်သဖြင့် သာဦးဖြူပင်ပန်းပြီးအိပ်ချင်လာသည်။ သူ့သူငယ်ချင်းမများကို အိမ်ပြန်လို့ တရီးတမောအိပ်ချင်ကြောင်းပြောသည်။ သူ့သူငယ်ချင်းမများကလည်း "အေး ယင်းပိုင်ဆိုကေ ပြန်လီ၊ ညဇာသားပွဲသိမ်းဖို့ ငရို့လာခေါ်မည်" ဟုမှာလိုက်သည်။ သာဦးဖြူ အိမ်သို့ရောက်၍ အိပ်ရာတွင်ခေါင်းချသည်နှင့် ချက်ချင်းအိပ်ပျော်လားသည်။
အကယ်အမှန် သူမ၏သူငယ်ချင်းများက မိုးထသား (၄) ချက်တီး သျှင်ပြူပွဲကူဖို့ သာဦးဖြူအားလာနှိုးသောအခါ သာဦးဖြူမှာ ပျောက်ခြင်းမလှပျောက်နီသည်။ ရွာလူကြီးနှင့် ရွာသူရွာသားများ ပျောက်ဆုံးနီသော သာဦးဖြူကိုရှာဖို့ အပူတပြင်းစီစဉ်ကတ်ရသည်။ သူမတွင် ရည်စားလည်းမဟိသဖြင့် ခိုးရွာလိုက်စွာလည်း မဖြစ်နိုင်။ ခိုးရွာလိုက်လျှင် ရွာဓလေ့အရ ကြက်ပေါင်တိုက်သံကြားရဖို့။ ယင်းပိုင်လည်း တယောက်မကြား။ မဆမသာဦးဖြူအမိကလည်း တယောက်တည်းသမီးအလိမ္မာအတွက် မျက်ရည်နှင့်မျက်ခွက်ဖြစ်လျှက်ဟိသည်။ သမီးသာဦးဖြူဇာသို့ ပျောက်လားခရေလဲ စဉ်းစားမရဖြစ်နီသည်။ ရွာသားများက သူမလားတက် ရောက်တက်သောနီရာတိုင်းသို့ လိုက်ရှာသော်လည်း လုံးဝမတွိ။ သို့အတွက် ရွာသားများ လူစုလေးစုခွဲလိုက်သည်။ အနောက်ဖက်ကို တစု။ အရှိဖက်ကို တစု။ မြောက်ဖက်ကို တစု၊ တောင်ဖက်ကို တစု။ ယင်းပိုင် အရပ်လေးမျက်နှာသို့ လေးစုခွဲလျှက် လိုက်ရှာသည်။
မြောက်ဖက်ကအဖွဲ့သည် သာဦးဖြူကို ရွာမြောက်ဖက်အဆုံး ကျွဲကူးမြစ်ကမ်းနဖူး ပြာပင်ဂွတွင် ဆောင့်ကြင်ထိုင်လျှက်တွိသည်။ သာဦးဖြူမှာ မျက်စိနှစ်လုံးကြောင်တောင်ဖွင့်လျှက် ဖွတ်ကြင့်ကြင့်နီသည်။ အတွိအကြုံဟိသောလူကြီးများက အဖွဲ့သားများအား အသံတစုံတရာမပြူရန် သတိပီးလိုက်သည်။ ယင်းနောက် အားကောင်းမောင်းသန်အောင်သိန်းကျော်ကို ပြာပင်ထက်သို့ တိုးတိုးတိတ်တိတ်တက်စီပြီး သာဦးဖြူအား နောက်မှဆုပ်ကိုင်လှန့်နှိုးရန် မှာလိုက်သည်။
အောင်သိန်းကျော်လည်း မှာလိုက်သည့်အတိုင်း သာဦးဖြူကို နောက်မှဆုပ်ကိုင်လှန့်နိုးလိုက်ရာ သူမသည် အလန့်တကြားအော်၍ ငိုသည်။ သိန်းကျော်အောင်မှ နောက်ကအားနှင့်ဖက်ထား၍ သာဦးဖြူမှာ ပြာပင်ထက်က ခုန်ဆင်းမဖြစ်လိုက်။ သာဦးဖြူ ပဇာကြောင်းကြောင့် ပြာပင်ထက်တွင် ဖွတ်ကြင့်ကြင့်နီပါသနည်း။
အကျွန်ရို့ ရခိုင်ကျွန်းရွာများတွင် ဂျတ်လူမျိုးများကိုယုံကြည်သော အယူအဆ အခုထက်တိုင်ဟိပါသည်။ ဂျတ်လူမျိုးများသည် အိမ်၊ လူ၊ တော၊ ပွဲလမ်းသဘင်စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံ ဖန်ဆင်းနိုင်စွမ်းဟိကြောင်းယုံကြည်သည်။ သာဦးဖြူသည် ယင်းနိ မိုးထသား (၄) ချက်မတီးခင်ကပင် ဂျတ်လူမျိုးများလာရောက်ခေါ်ဆောင်ခြင်းခံရသည်။ ပြာပင်ထက်တွင်ထိုင်နီစဉ် သူမ၏စိတ်အာရုံထဲ၌ သူမသည် အိပ်ရာ၌ပင် အိပ်လျှက်ဟိကြောင်း အာရုံရောက်နီသည်။ အလှူ၌ သူမတွိကြုံခရသော အဖြစ်အပျက်အားလုံးသည် အကယ်အမှန်အဖြစ်အပျက်မဟုတ်။ ဂျတ်လူများက ဖန်ဆင်းထားသော အဖြစ်အပျက်များသာလျှင်ဖြစ်သည်။
မှတ်ချက် ။ ။ အေဇာတ်လမ်းသည် ရခိုင်ကျွန်းရွာတရွာတွင် အဂယင့်ဖြစ်ပျက်ခသော ဇာတ်လမ်းတပုဒ်ဖြစ်ပါသည်။ ဇာတ်ကောင်နာမည်များကို ပြောင်းလဲထားပါသည်။ ဖြစ်ရပ်မှန်။
Posted by KingMarayu at 23:310comments
Labels: ရခိုင် ဂျက်ဝတ္ထူတိ
မခြောက်လား သိမ့်ပါ ....................။
အဂုထိ မငြိမ်သက်ကတ် သိမ့်ပါ ...........။
အဂုထိ ရုန်းမထွက်နိုင်သိမ့်ပါ ...............။
အဂုထိ မပြုံးနိုင်သိမ့်ပါ ......................။
ထိုတစ်စု ဒေတစ်စု နန်.
အနာဂတ်မှာ ရင်သန်ထမြောက် ဖို.
ရောင်ခြည် ရှာမတွိသိမ့်ပါ ...............။
ပူဇော်ခွင့် ပီးပါ အဖ ...................................။
ကောင်ကရ မြင်းကျား တွေးနိန်ရေငါ
ငါ့ကို လာ ယောင်းလို. .................။
ငါ့ ဟီတာ(heater) နန်.
အအီးဓာတ်က ၊ ငါ့အခန်းမှာ
သူတပြန် ငါတပြန် ................။
ငါ့မွဲ.ယာနန်. ဒူးပတ်(duvet) က
စာအုပ်စင်က စာအုပ်တိက လည်း
ငါ့ကို တဗျင်း စိတ်ကုန် န်ိန် ကတ်တေ။
ငါ့ အခန်း ထောင့်က
ငါ့ ဂီတာ ကလည်း ငါ့ကို
လက်သီး ဆုပ်ပြနိန်ရေ ...............။
ဇကုန် သတ်နိန်ကတ်တေ ...................။
ကဗျာချေ တပုဒ်ဖြစ် အသက်သွင်းဖို.
ကွန်ပျူတာ စက်ခလုတ် တိဘက်ကို
တောလို. တောလို. ပါလတ်တေ .................။
Posted by KingMarayu at 19:430comments